mercredi, 01 avril 2020 14:30
Mahatsiatra Ambony: Tsy mitondra ny tsimok’aretina Covis-19 ilay ramatoa tonga avy tany Norvezy
Namoaka fanambarana ny Centre Opérationnel Covid-19 Mahatsiatra Ambony androany milaza fa « araka ny valin’ny fitiliana nataon'ny Institut Pasteur, dia fantatra fa tsy mitondra ny tsimok’aretina coronavirus ilay Ramatoa 27 taona, tonga avy tany Norvezy, izay nahiana mafy ho nitondra izany tsimok’aretina izany ». Hatreto dia tokana no mitondra ny tsimokaretina ato Mahatsiatra Ambony ary efa misy ny fepetra hentitra noraisina hifehezana ny fiparitahan’ity valan’aretina ity.
mercredi, 01 avril 2020 11:56
Tsena Mora: Nametrahana koa eny amin'ireo oniversitem-panjakana
Nisitraka ny Tsena Mora ny sekoly ambony politeknika Vontovorona ny 31 martsa, taorian’ny teny Ambohipo ny 30 martsa 2020 mba ho fitsinjovana ireo mpianatra rehetra eny amin'ny oniversite amin'izao fotoan-tsarotra diavin'ny firenena izao. Nilamina ary tao anatin'ny fanajana ny fepetra feno amin'ny fisorohana ny fiparitahan'ny aretina ny fitsinjarana ireo entana tena ilaina amin’ny fiainana andavanandro. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 01 avril 2020 11:48
Ady amin'ny Covid-19: Nanolotra vola sy vary ary tampim-bava miisa 100 000 ny fianakaviam-ben'ny Sinoa miasa sy monina eto Madagasikara
Fanomezana mitentina 270 tapitrisa Ariary no natolotry ny fianakaviam-ben'ny Sinoa miasa sy monina eto Madagasikara teny amin'ny Foibem-pibaikoana (CCO) ny Covid-19 Ivato ny talata 31 marsa. Anatin'izany ny lelavola 200 tapitrisa Ariary natolotra ny "Receveur Général d'Antananarivo", ny ambiny kosa hatolotra ny Kaominina Antananarivo Renivohitra miampy vary 20 taonina. Nanolotra tampim-bava miisa 100 000 ihany koa ireo orinasa sinoa miasa eo amin'ny sehatry ny jono hiadiana amin'ny fiparitahan'ity valan'aretina coronavirus ity. Nandray izany tamin'ny alalan'ny fitondram-panjakana ny minisitry ny Ati-tany sy ny fitsinjarampahefana sady lehiben'ny CCO Ivato, Razafimahefa Tianarivelo. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 01 avril 2020 10:47
Nosy Maorisy: 5 no efa matin’ny coronavirus
Olona roa omaly 31 marsa 2020 no nopaohin’ny fahafahetsana vokatry ny tsimokaretina coronavirus. Tafakatra dimy hatrin’io omaly io ireo olona namoy ny ainy noho io valanaretina io tao amin’ny Nosy Maorisy, ary 143 ireo olona mitondra ny tsimokaretina.
mardi, 31 mars 2020 21:58
Frantsa: Handefa fiaramanidina eto haka ireo Frantsay maniry hody
Handefa fiaramanidin’ny kaompania Air France eto ny fanjakana frantsay, haka ireo Frantsay maniry hiverina any Frantsa manoloana ny fisian’ny valanaretina coronavirus. Hiala atsy La Rénion, tsy mitondra mpandeha, io fiaramanidina io, ary hiainga eto Antananarivo ny tolakandron’ny sabotsy 4 aprily 2020. Talohan’io, dia efa nisy fiaramanidina anankiroa an’ny kaompania EW naka teratany frantsay miisa 83 niainga tao Mahajanga, niazo an’i Mayotte.
mardi, 31 mars 2020 20:27
Madagasikara: Nahitana tranga coronavirus vaovao miisa 04 androany
Miisa 50 hatramin’ny telo ora tolakandron’ity 31 Martsa 2020 ity ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara taorian’ny fitiliana nataon’ny Institut Pasteur. Tranga vaovao ny 04 amin’izy ireo. Lehilahy ary vahiny avokoa ireto tranga vaovao ireto, mpandeha tamin'ny zotram-piaramanidina AF934, ka ny telo monina any Toamasina ary ny iray eto Antananarivo. Tsy ahitana soritraretina izy ireo, araka ny fampitam-baovao nataon’ny Pr Vololontiana Hanta, mpitondrateny ny Foibem-pibaikoana momba ny coronavirus, saingy efa araha-maso any amin'ny hopitaly. Tsy ahitana soritr’aretina ny 39 amin'izy ireo, misy soritr’aretina kosa ny 11 fa tsy misy sempotra.
mardi, 31 mars 2020 20:26
Coronavirus: Hatao faritra mihidy ny Fokontany Antamponjina-Fianarantsoa
Nandray fepetra avy hatrany ny Governoran’i Mahatsiatra Ambony, taorian’ny nahafantarana fa misy tranga iray voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus tamin’ireo olona valo, natokam-ponenana tao Antamponjina. Hatao faritra mihidy ny Fokontany Antamponjina. Mila manana antony manokana ny fivezivezena.
mardi, 31 mars 2020 19:30
Espagne: Tafakatra 849 no namoy ainy tao anatin’ny iray andro
849, io no isa ambony indrindra tamin’ireo namoy ny ainy noho ny coronavirus tao anatin’ny iray andro tany Espagne. Tafakatra 8 189 ireo namoy ny ainy any amin’ity firenena ity, hatramin’ny androany. Izy no firenena eoropeana faharoa aorian’i Italia, ataon’ity valanaretina ity mitondra faisana indrindra hatreto.
mardi, 31 mars 2020 19:23
Mayotte: Nisy olona iray matin’ny valanaretina Covid-19
Miisa 94 ireo trangan’aretina coronavirus voamarina atsy amin’ny nosy Mayotte, iray amin’ireo departemanta frantsay aty amin’ny ranomasina indianina. Nanao fanambarana ny tomponandraikitra ara-pahasalamana ao an-toerana, androany, fa nisy olona iray matin’ity Covid-19 na coronavirus. Ity no tranga fahafatesana voalohany naterak’io valanaretina io tao Mayotte.
mardi, 31 mars 2020 19:20
Rodrigues: Tsy ahitana tranga Covid-19
Nosy iray aty amin’ny ranomasina indiana i Rodrigues, ary isan’ireo firenena vitsy manerantany tsy voan’ny valanaretina coronavirus.